‘म सभापतिको दाबेदार हुँ, त्यसैअनुसार तयारीमा छु” (अन्तर्वार्ता) – Nepal Views
“अहिले पार्टीका क्षेत्रीय अधिवेशनहरू देशभर चलिरहेको छ। सबै जना त्यसमा व्यस्त छन्। म पनि त्यसमै व्यस्त छु। १० गतेपछि छलफल हुन सक्छ। तर मसँग कसैको यसबारे कुरा भएको छैन। म आफ्नै तयारीमा छु।”
काठमाडौं। १ मंसीरको बिहानै कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र नयां तरंग ल्यायो। उनले १४ औं महाधिवेशनमा कोइराला परिवारवाट शेखर कोइराला साझा सभापतिको दाबेदार हुने बताएका थिए।
आफूहरूबीच पारिवारिक तहमा यसबारे सहमति पनि भइसकेको उनले दाबी गरेका थिए। तर उनी त्यही दिन संखुवासभा पुगेर आफैंले बोलेको कुरा खण्डन गर्न भ्याए। जहाँ उनले आफैंले फेरि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका थिए।
कांग्रेसलाई १४ औं महाधिवेशनले छोपिसक्यो। महाधिवेशन आउन दुई साता मात्र बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा कोइराला परिवारभित्रबाट १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार खोजी भइरहेको छ। महामन्त्री शंशाकले पार्टी केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई सभापतिमा अघि सारे पनि उनी भने यस विषयमा मौन छन्।
तर यही परिवारभित्रबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीपुत्री सुजता कोइरालाले भने यो महाधिवेशनमा सभापति दाबी गरेकी छन्।
कांग्रेसको कोइराला परिवारभित्र के साझा सभापति खोजी हुन नसकेको हो त ? यसै विषयमा कोइराला परिवारभित्रकै उनै सुजता कोइरालासँग नवीन झाले गरेको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता।
तपाईहरूको कोइराला परिवारमा १४ औं महाधिवेशनलाई लिएर सहमति बन्यो भनियो। तर पछि त्यो त्यतिकै फासफुस सेलायो नि ?
त्यो अब पुरानो कुरा भइसक्यो, त्यही भएर म त्यसबारे टिप्पणी गर्दिनँ। जहाँसम्म महाधिवेशनको कुरा छ। म आफैं सभापतिको तयारीमा छु। शुरुदेखि मैले भन्दै आएको छु, म पार्टीको सभापतिको दाबेदार हुँ। र म त्यहीअनुसार तयारीमा पनि लागेका छु।
अनि १ मंसीरमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले कोइराला परिवारवाट शेखर कोइराला सभापतिको उमेदवार बन्ने कुरा गर्नु भएको थियो नि त ?
त्यस्तो कुनै ठोस सहमति मसँग कसैको पनि भएको छैन। अहिले पार्टीका क्षेत्रीय अधिवेशनहरू देशभर चलिरहेको छ। सबै जना त्यसमा व्यस्त छन्। म पनि त्यसमै व्यस्त छु। १० गतेपछि छलफल हुन सक्छ। तर मसँग कसैको यसबारे कुरा भएको छैन। म आफ्नै तयारीमा छु।
त्यसोभए १४ औ महाधिवेशनमा कोइराला परिवारकै तीनै जना उम्मेदवार बन्छन् हैन त ?
अरु ककसले केमा उमेदवारी दिन्छन् त्यो म कसरी भनूँ। म आफ्नो कुरा भन्न सक्छु। कोइराला परिवारबारे म केही बोल्न चाहिनँ। छलफल र सरसल्लाह नै नहोला त्यो भन्दिनँ। १० गतेपछि त्यो हुन पनि सक्छ।
अहिलेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने क्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म आफ्नो पक्षबाट खुशी नै छु। तल्लो तहबाट कांग्रेसमा धेरै नयाँ मानिसहरू जोडिएका छन्। यसले सम्रगमा कांग्रेसलाई फाइदा नै पुर्‍याउँछ। महाधिवेशनको गणितले पनि हामी दुःखी हुने ठाउँ छैन।
तपाईंहरू (कोइराला परिवार) सबै जना छुट्टाछुट्टै सभापतिको दाबेदार भएपछि कसरी अहिले सभापतिको विकल्प बन्न सक्नु हुन्छ र ?
यसबारे हामी सबैबीच छलफल हुन्छ होला। तर त्यो अब १० गतेपछि मात्रै हुन्छ। किनकि त्यतिबेला छलफल गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पनि गणितीय तथ्यांक हुन्छ। जसले हामी सबैको यर्थाथ धरातल पनि देखाउला। म त कांग्रेसको स्वाभाविक सभापतिको दाबेदार हुँ। जुन कुरा मैले शुरुदेखि भन्दै आएको छु।
२०७८ मंसिर ९ गते १४:२७